Ngenisa kwiimephu ze-shp ukuya kwi-Microstation-Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Ukungenisa kwiimephu ze-shp ukuya kwi-Microstation
Ukungenisa kwiimephu ze-shp ukuya kwi-Microstation
NdinoLuhlu lweArcView oluqulathe imimandla yeedolophana zommandla okwifomathi yobume, kwaye ndifuna ukungenisa kwiMicrostation Geographics. Masibone ukuba ungayenza njani:
Ngenisa i vectors
Kubalulekile kule nto ukuvula iprojekthi kwi-Microstation Geographics, kule meko ndidibene kunye neSiseko sokuFumana kwi-ODBC.
Khetha "Iifayile / ukungenisa / shp, mif, e00 ..." kunye nepaneli yokulawula iboniswa, apho ifayile efunekayo ingeniswe ngokukhetha "ifayile / khetha ifayile yokungenisa".
Ayikho kuphela idatha engeniswayo kwifom ye .shp kodwa kwakhona esuka kwiMapinfo (.mif) kunye ne-Old style yeArcinfo (ifom .XXUMUMX).
Nje ukuba ifomathi ikhethwe, kufuneka kukhethwe uphawu lwevektha zokungenisa elizweni eziza kungeniswa elizweni, ke uphawu lonyulelwa umda kunye necentroid njengoko kunokuba njalo. Kuya kufuneka ukhethe uhlobo lwedatha. inqaku, umgca, okanye indawo kunye nefomathi yeyunithi kunye nendawo yokufikela.
Ukuba awufuni ukungenisa i-database ingenisa ngokukhawuleza kakhulu, unokukhetha kwakhona indawo enye ngocingo.
Olunye ukhetho olukhoyo lunokwenzeka ukuba ukungeniswa kwenzelwe ukucocwa kwepolotiki ukwenzela ukuba kungangifaki imilo kodwa i-linestrings kunye neenodes ezikhululekile zokungcola ... enye indlela efanelekileyo xa sikhumbula ukuba i-ArcView ayizange iphathe i-topology ukuze idatha isetyenziswe kwimveliso engcolileyo yesondlo kwi-chilazo.
Kuya kufuneka ukhethe ukhetho "lokungenisa itafile yophawu", emva koko ubonise ukuba leliphi igama itafile eya kuba nalo kwindawo yogcino lwedatha kunye neekholamu esifuna ukungenisa kuzo. Ngamanye amaxesha ndikhe ndabona ukuba igama .dbf iifayile ezinezithuba okanye oonobumba abangaqhelekanga zibangela ingxaki.
Ukuba kukho idatha emininzi yokungenisa, i-"step tile" inokukhethwa, ukwenzela ukuba xa kubonisa imiqolo kunye nekholamu inkqubo iya kwenza inkqubo phantsi kwenkcazo yendawo kwaye inokuphucula ukusebenza kwezixhobo.
Nje ukuba idatha ingeniswe elizweni, iisentroids kunye neemilo zidityaniswe kwindawo yogcino lwedatha, ukuze xa ubonisana nabo ngeqhosha "lokuphononongwa kwedatha", kuphakanyiswe itafile yolwazi esele ikhona. Ukwenza le icon isebenze "izixhobo / zejografi / zejografi"
Bhala i datha
Emva kokuba idatha ingeniswe, ulwazi luyakususwa kwiziko lokufikelela kwi-database ngokusebenzisa "i-Database / database", ephakamisa iphaneli apho umakhi wombuzo angavulwa, ukhetha itafile kunye nekholam ukusuka apho sifuna ukuzisa khona itekisi.
Ukongeza unokukhetha ifomathi yokubhaliweyo, uhlobo lwento (iseli, isicatshulwa, inqaku), iseti kwaye ukuba ufuna ukuvumelana nedatha.
Naliphi na idatha ekhishwe kwimephu izisa isiqhagamshelo, ukuze wenze "ukuhlaziywa kwedatha" yalo.
ezimbi, andizange ndibone iincwadi zezi.
Kwaye incwadana apho ndichazile ngokucacileyo oku kuthunyelwa kwam ukungenisa, inyaniso iya kuba luncedo kakhulu.
"Ulwazi aluthathi ndawo"
Ndiyabulela kakhulu ekuxazululeni ukungathandabuzeki kusebenza kakuhle, ukuba ndingathandabuzeki ukuba ndikubhalele.
hahaha Ndicinga ukuba yinto yokunethezeka ukusebenzela i-shp kwi-microstation ngaphandle kokuhamba nge-arcmap epheleleyo, kwakhona ndikubulela kakhulu
Akwenziwa oko xa uyingenisa ngaphandle. Kufuneka uzingenise ngaphandle njengoko zisiza, xa zingaphakathi kuwe ngokwesakhiwo.
Ifayile / imenenja yemephu, udala imodeli entsha
Emva koko nqakraza ngokukhawuleza kwinqanaba, kwaye ukhetha uphawu lokubonakalisa, kwaye apha ukhetha uhlobo lwesiganeko sokubhaliweyo, ngohlobo lomgca, ubukhulu, umbala okanye inqanaba.
Emva kokuxhaswa unokwenza ukhetho ngumbono wokwenza oko ufunayo kunye neziqendu.
kuhle, jonga ndisebenza neBentley PowerMap V8i kwaye ndiya "Ifayile / yokungenisa / iintlobo zedatha yegis..." ifestile "yokusebenzisana" iyavula
Ndinika "ukungenisa" ngeqhosha lasekunene kwaye ndinika "ukungenisa okutsha" intlawulo "shp"
apha konke okulungileyo, into endiyathanda ukuyenza kukugqiba ukungenisa umzobo kwi-microstation ngamanqanaba (izalathisi) ngokwemininingwane esuka kwikholam ye-shp
Ndiyichaza kakuhle kangcono:
kwi-shp Ndineipolgoni ze-2000 ezineenkcukacha ze-3 (indawo, uhlobo lwesityalo kunye nexabiso lokusingqongileyo)
Emva kokuba ndizama ukungenisa ezi iipolgoni ndingathanda ukuba zibe ngohlobo lwesityalo kwisigaba.
kuba xa ndiyithengisa, ibeka yonke into kwinqanaba elifanayo.
Okubi, kuphela nge-Microstation Geographics.
kwaye le nto, ingaba yenziwa kwi-microstation evamile?
Ndineenkcukacha ezimbalwa .shp kunye ne .shx kunye .dbf kwaye ndingathanda ukuyibiza.
database database uthi:
uncedo, ibhulogi enhle kakhulu, ukuba ufuna, faka iphepha lam, ukuthumela ingxelo. mbuliso
isiseko se-argentina-chile-brazil ne-uruguay